जनतालाई विष नखुवाऊ | चितवन पोष्ट
जनतालाई विष नखुवाऊ
केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति दैनिकरुपमा संवेदनहीन बन्दै जान थालेको छ । काठमाडौँमा प्रदूषण बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीले माक्स लगाउने दिनको अन्त्य भएको हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएर जग हँसाए । त्यसको केही दिनमा सरकारले जनतालाई विष खुवाउने निर्णय गरेर उपभोक्ता अधिकारमाथि गम्भीर खेलबाड गरेको छ । सरकारले असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । असार ३ गतेदेखि लागू हुने उक्त निर्णय भारतीय पक्षको दबाबका बीच फिर्ता लिएर सरकारको राष्ट्रवाद एकाएक लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । आमजनताको स्वास्थ्य र भावनाविपरीत सरकारको निर्णयप्रति चौतर्फीरुपमा आलोचना बढेको छ । जनतालाई विष खुवाउने निर्णयविरूद्ध संसद् र सडकमा चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रतिपक्षी दलमात्रै होइन नेकपाभित्रै पनि यसको खुलेरै आलोचना भएको छ । भारत होस् वा तेस्रो मुलुकबाट तरकारी आयात गर्नुपर्ने हामी नेपालीको नियति बनेको छ । तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुको पीडा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसमाथि विषादी परीक्षण नै गर्न नपर्ने आत्मघाती निर्णय गरेर सरकारले जनताप्रति जवाफदेही नरहेको पुष्टि गरेको छ ।
दुई तिहाइको बलियो मानिएको सरकार कति निरीह रहेछ भने उसले भारतीय पक्षको दबाब एक महिना पनि थेग्न सकेन । विडम्बना ! राज्यसँग विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्रको अभाव थियो भने हठात् विषादी परीक्षणका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई किन निर्देशन दियो ? तरकारी तथा फलफूल बोकेका सवारीसाधन भन्सार बिन्दुमा रोकिँदैमा सरकार किन फतक्कै गल्नुप¥यो र दास शैलीमा आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुप¥यो ? यतिबेला कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रवाद लम्पसारवादमा परिणत भइसकेको छ । सीधै जनताको भान्सासम्म पुग्ने विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलमा खुलेआम प्रवेश रोक्नु सरकारको दायित्व हो र हुनैपर्छ । जनताको भान्सामा विषादीयुक्त तरकारी भित्रिन थालेको दशकौँदेखि हो । यद्यपि, सरकारले यस विषयमा परीक्षण गराएर भित्र्याउने निर्णय आफैँमा स्वागतयोग्य थियो । तर, सकारात्मक सन्देशको सञ्चार नहुँदै सरकारले घुँडा टेक्यो । हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र हचुवामै फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले सरकार जनअधिकारका पक्षमा संवेदनशील नरहेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारको यो आत्मसमर्पणवादी शैलीले भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूल विषादीयुक्त नै भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो देशवासीकै लागि अभिशापको विषय हो ।
सरकारले सार्वजनिक चासो र जनहितका विषयमा भारतको दबाबमा आफ्नो निर्णय सच्याउनु घातक छ । भारतमा निर्यात हुने अलैँची, अदुवा, गोलभेँडा, चिया तथा फलफूलमा खाद्य स्वच्छताका नाममा नेपाली किसान दाजुभाइले विषादी परीक्षणका नाममा अनावश्यक दुःख पाउने गरेका छन् । नेपालमा खपत हुने ४४ प्रतिशत फलफूल तथा तरकारीको हिस्सा भारतबाटै आयात हुने गर्छ । यति ठूलो परिमाणमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गराउन नपर्ने नीतिले आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको छ । सरकारले समयमै प्रयोगशाला र उपकरण खरिदविना नै विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । देशभर रहेका आठवटा परीक्षण केन्द्रलाई व्यवस्थित गरी विषादी परीक्षणको निर्णय गरेको भए पनि यतिधेरै विवाद चुलिने थिएन । भारतका अधिकांश जिल्लामा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलमा ७५० गुणाभन्दा बढी विषादी रहेको भनी युरोपेली मुलुकहरुले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी जनतालाई प्रत्यक्ष विष खुवाउने कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ । विषादीरहित तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । सरकारले यथाशीघ्र आफ्नो निर्णय सच्याउँदै भन्सार बिन्दुमा विषादी परीक्षण कार्य सुचारू गर्नु जरूरी देखिन्छ ।